यौन सम्पर्कमा कण्डम प्रयोग नगर्दा पनि पाठेघरको क्यान्सर | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
यौन सम्पर्कमा कण्डम प्रयोग नगर्दा पनि पाठेघरको क्यान्सर
प्रकाशित मिति २८ पुष २०७५, शनिबार २०:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । क्यान्सर अहिले आम समस्या बनेको छ । स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर महिलामा हुने सबैभन्दा खतरनाक क्यान्सर हो । नेपालमा महिलामा हुने क्यान्सरमध्ये पहिलो स्थानमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर छ भने दोस्रो स्थानमा स्तन क्यान्सर छ । सुरुवाती अवस्थामा पत्ता नलागे धेरै महिलाको मृत्यु यही क्यान्सरका कारण हुन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक अक्टोबर महिनालाई स्तन क्यान्सर जागरण महिनाका रूपमा मनाउने गरेको छ । आधुनिक तथा अप्राकृतिक जीवनशैली, खानपान, वातावरणीय प्रदूषण तथा विविध रसायनका कारण महिलामा मात्र होइन युवतीहरूमा समेत यो क्यान्सर देखिन थालेको छ । विकसित मुलुकमा प्रत्येक ८ महिलामध्ये १ जनामा स्तनसम्बन्धी कुनै न कुनै जटिलता देखिएको छ । एसियाली मुलुकमा भने प्रत्येक २२ जनामध्ये १ जना महिलामा यो समस्या देखा पर्ने तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
स्तन क्यान्सर कुनै पनि उमेरका महिलालाई हुनसक्छ । यो क्यान्सर वंशानुगत कारणले हुन्छ । परिवारमा नजिकका नातेदार, आमा, काकी, हजुरआमा आदिमा यो समस्या भए त्यस्ता महिलामा पनि स्तन क्यान्सर हुनसक्छ । हिजोआज ढिलो विवाह गर्ने तथा शिशु जन्माउने चलनका कारण पनि महिलामा स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना वृद्धि भएको पाइन्छ । शिशुलाई लामो समयसम्म स्तनपान नगराउँदा पनि स्तन क्यान्सरको जोखिम बढ्छ ।
– महिनावारी कम उमेरमै हुने तथा मेनापज ढिलो भए पनि स्तन क्यान्सरको खतरा बढ्छ ।
– गलत जीवनशैली तथा चिल्लो खाना, शारीरिक व्यायामको कमी आदिका कारण पनि स्तन क्यान्सर हुनसक्छ ।
– खानपानमा मिसावटका कारण पनि स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना बढ्छ ।
– एस्ट्रोजन हार्मोनका कारण स्तन क्यान्सरको खतरा हुन्छ । एक प्रतिशत पुरुष पनि यसको सिकार हुन्छन् ।
– स्तन क्यान्सरको सुरुको अवस्थामा बिरामीले सामान्यतया कुनै लक्षण अनुभव गर्न नसक्नु ।
– एउटा स्तनमा नदुख्ने गिर्खा तथा कडा गिर्खा आउनु । आकारमा परिवर्तन आउनु ।
– स्तनको मुन्टाबाट रगत तथा रगतरहितको तरल पदार्थ बगिरहनु ।
– छालाको अल्सर हुने, स्तनको छालामा परिवर्तन आउने, गाढापन बढ्ने वा छालाको रंग परिवर्तन हुने ।
– स्तनको मुन्टो वरिपरि वा मुन्टोमै स–साना घाउ–खटिरा एवं बिमिरा देखा पर्नु । स्तनको मुन्टो पहिलेभन्दा फरक रूपमा देखापर्नु वा मुन्टो भित्र गडिनु ।
– अकस्मात् शारीरिक तौल घट्नु तथा हड्डी दुख्नु ।
– मद्यपान तथा धूम्रपानबाट टाढै रहने ।
– तौल नियन्त्रण राख्न नियमित रूपमा एक्सरसाइज गर्ने तथा स्वस्थ खाना खाने ।
– सबै महिलाले क्लिनिकल ब्रेस्ट इक्जामिनेसन गर्ने ।
– सुत्केरी अवस्थामा धेरैभन्दा धेरै स्तनपान गराउने ।
– परिवारमा कसैलाई स्तन क्यान्सर भए नियमित रूपमा चेकअप गराउने ।
– २० देखि ४० वर्षका महिलाले सेल्फ इक्जामिनेसन गर्ने । त्यसपछि केही भए मात्र सोनोग्राफी गराउने ।
– ४० वर्षमाथिका महिलाले बर्से्नि स्क्रिनी म्यामोग्रामका साथै विशेषज्ञ चिकित्सकको परामर्श लिने ।
डा. ज्योति रायमाझी–स्तन तथा कस्मेटिक सर्जन,
नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल
–डा. अचला वैद्य
नेपालका महिलामा देखिने क्यान्सरमध्ये पाठेघरको मुखको क्यान्सर (सर्भाइकल क्यान्सर) सबैभन्दा बढी देखिने रोग हो ।
के कारण ?
– यो क्यान्सर ७० प्रतिशत ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसका कारण हुन्छ जुन यौनसम्पर्कका दौरान फैलन सक्छ । शारीरिक सम्पर्कका कारण यो भाइरस सर्छ । भाइरस विभिन्न किसिमका हुन्छन् । क्यान्सर १६ र १८ भाइरसले पाठेघरको मुखको क्यान्सर गराउँछ ।
– यसको प्रमुख कारण महिलाले पटक–पटक यौन पार्टनर परिवर्तन गर्नु हो साथै पुरुषले धेरै जनासँग असुरक्षित यौनसम्बन्ध राख्दा पनि यो क्यान्सर महिलामा सर्छ ।
– सानै उमेरमा विवाह भएको छ र सानै उमेरदेखि यौन सम्बन्ध राखिएको छ भने पनि यो समस्या देखा पर्छ ।
– जुन महिलाले २० वर्षको उमेरभन्दा पहिले सन्तान जन्माउँछन् त्यस्ता महिलामा पनि यसको सम्भावना वृद्धि हुन्छ । धेरै सन्तान जन्माउने महिलामा पनि यो क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ ।
– यौन सम्पर्कका क्रममा कन्डम प्रयोग नगर्दा पनि पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने खतरा बढ्छ ।
– धेरै धूम्रपान पनि यसको एउटा कारण हो ।
– यौन सम्पर्क गर्दा रगत देखिनु ।
– योनिबाट सेतो गन्हाउने पानी बग्नु ।
– महिनावारी सुकेपछि पनि रगत देखिनु । सानो पेट दुखिरहनु ।
– ढाड दुख्नु, थकाइ बढी लाग्नु ।
– लामो समयसम्म खोकी निको नहुनु । स्वरमा परिवर्तन आउनु ।
– तौल घट्दै जानु, दिसा–पिसाब गर्ने समय परिवर्तन हुनु । खाना खान मन नलाग्नु ।
कसरी पत्ता लगाउने पाठेघरको क्यान्सर ?
प्याप स्मेयर–यो परम्परागत विधि हो ।
लिक्विड बेस्ड साइटोलोजी–यो अत्याधुनिक विधि हो ।
भिजुअल इन्सपेक्सन विथ एसिटिक एसिड तथा भिजुअल इन्सपेक्सन विथ लुगोल्स आयोडिन–यो पाठेघरको क्यान्सर जाँच्ने सहज एवं सुलभ विधि हो । यसको प्रयोग हेल्थ क्याम्प वा ग्रामीण भेगमा गर्न सहज हुन्छ ।
कल्पोस्कोपी–माथिका तीनवटा टेस्ट गर्दा समस्या देखिए थप सुनिश्चितताका लागि कल्पोस्कोपी गरिन्छ । यसले योनिद्वारमा क्यान्सरका घातक कोषिकाहरू उत्पादन हुनुपूर्व र ती कोषिकाहरू उत्पादित भएपछि त्यहाँ देखिने परिवर्तनका बारेमा पत्ता लगाउन सहयोग पु¥याउँछ ।
पाठेघरको क्यान्सर हुनुभन्दा १५–२० वर्षअघि प्रि–पाठेघरको क्यान्सर बुझ्नुपर्छ । क्यान्सर एक्कासि देखा पर्दैन । यसका पनि दुईवटा ग्रेड हुन्छन् ।
१) लो ग्रेड स्क्वामस इन्ट्राइपिथेलियल लेजन–यसको उपचार १ सय प्रतिशत सम्भव छ ।
२) हाई ग्रेड स्क्वामस इन्ट्राइपिथेलियल लेजन–यसको उपचारका लागि ३–६ महिनामा नियमित परीक्षण गराइरहनुपर्छ ।
– केही कुरामा ध्यान दिए पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट जोगिन सकिन्छ ।
– यौन सम्पर्क नगरेका महिलामा यो क्यान्सर हुँदैन ।
– २० वर्षको उमेरसम्म यौनसम्पर्क नगर्ने तथा २५ वर्षको उमेरपछि सन्तान जन्माए पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट सुरक्षित रहन सकिन्छ ।
– सन्तुलित जीवनशैली अपनाउनुपर्छ ।
यौन पार्टनर एकभन्दा बढी हुनु हुँदैन । यौन सम्पर्कका बेला कन्डम प्रयोग गर्नुपर्छ ।
– यो क्यान्सरविरुद्धको खोप पनि आविष्कार भैसकेको छ । टिनएजमै ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस (एचपीभी भ्याक्सिन) दिँदा पनि भविष्यमा हुन सक्ने पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट जोगिन सकिन्छ । यो भ्याक्सिन ९ वर्षदेखि १३ वर्षको उमेरमा लगाउनुपर्छ । यसले एचपीभी इन्फेक्सनबाट जोगाउँछ ।
नेपालमा केही ठाउँमा यसको प्रयोग भैरहेको छ । चार–पाँच वर्षअघि अस्ट्रेलियन क्यान्सर फाउन्डेसनको सहयोगमा काठमाडौंबाहिरका स्कुलका बालबालिकालाई यो इन्जेक्सन लगाइएको थियो । नेपाल सरकारले पनि हालसालै स्कुलका बालबालिकालाई उपत्यकाबाहिरका २–४ ठाउँमा यो खोप उपलब्ध गराएको छ । यो खोपले पनि पछि गएर हुन सक्ने पाठेघरको क्यान्सरबाट जोगाउँछ । नारी मासिकबाट
लागूऔषध कारोबारीलाई पक्राउ गर्न पोखरामा प्रहरीले गोली चलायो
पोखरा । लागूऔषध कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा पोखरामा प्रहरीले गोली चलाएको छ। लागूऔषध कारोबारीलाई पछ्याउँदै गएको प्रहरीमाथि नै आक्रमण…
रवीन्द्र मिश्र भन्छन् स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको विवादित अन्तरवार्तामा पत्रकारको कमजोरी छ
काठमाडौं । साझा विवेकशील पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको विवादित अन्तरवार्तामा पत्रकारको कमजोरी औंल्याएका छन्…
अड्कियो कतार भिसा सेन्टर
काठमाडौं । कतारले काठमाडौंमा खोल्न लागेको भिसा सेन्टर ‘लाउन्ज’ शुल्कसम्बन्धी विवादमा अड्किएको छ ।
नेपाली कामदारमाथि शोषण अन्त्य गर्ने…
प्रहरीले गर्यो दुई सय रोपनी गाँजा फडानी
बागलुङ ।अवैध लागूऔषध बनाउन प्रयोग गरेको भन्दै प्रहरीले ताराखोला गाउँपालिका–४ र ५ मा लगाइएको गाँजा (लेकाली भाँगो) फडानी गरेको…
न्यायपालिकामाथि एमालेबाट लगातार आक्रमण
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र त्यसपछि एमाले व्याकग्राउण्ड भएका न्यायाधीशले बगावत गरेर…
निषेध उल्लङ्घन गरी अमेरिका प्रबेश गर्नेलाई शरण नमिल्ने
संयुक्त राज्य अमेरिका । अमेरिकाले आफ्नो दक्षिणी सीमाबाट देशभित्र पस्ने गैरकानूनी आप्रवासीहरू नयाँ नियम अनुसार शरणार्थी बन्न अयोग्य हुने…